Imisa Caqli ayaa jiraa? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray) | Hangool News
Imisa Caqli ayaa jiraa? (WQ: Nuur Xaaji Xiiray)
May 9, 2019 - Written by Hangool News 1
Qaar ayaa markiiba la soo carari oo odhan hal caqli ayaa jira, bal hada inta aanad ka jawaabin doodayda dhagayso.
Nin dadkaa aqoonta loo tuhmaayo, ayaa dood na dhex martay, runtii aad ayaanu u kala fogayn. Kaaf iyo kala dheeri.
Markii aan ka tagay ayaan su’aashan is waydiiyay, maxay dadka baniaadamku isu fahmi laayihiin?
Ninkan waa nin muslim ah shantii arkaan islaamka ooga reer Hargaysaad ah, runtii sifaad badan ayaanu wadaagnaa, hadana aragtida aad ayaanu u kala fognahay, sababtaa ayaan la yaabay, arinkii ayaan ka fikiray waxaan gaadhay aragtidan.
Horta bani aadamku noolayaasha uu illaahay abuuray kuwa ugu diciifsan ayuu ku jiraa, hadana wuxuu ka qaalib noqday, noolayaashii kale ee ka awooda badnaa oo dhan, sababtu waa caqligaa illaahay siiyay.
Caqligu waa awood halis ah, hadii wanaaga loo adeegsado waxbuu dhisaa, hadii xumaha loo adeegsadana wax ayuu burburiyaa.
Hadaba caqliga awoodaa lihi wuxu u baahan yahay in la hago oon xadhkah loo siidayn mar hadii uu khatartaa leeyahay.
Hadaba waxaan ogaaday in ay laba caqli jiraan, caqliga muslimka iyo caqliga xayawaanka, (waa caqliga gaalada, munaafiqiinta, siyaasiyiinta iyo basaasiintooda eh)
Caqliga yuhuuda, qaar baa odhan tolow muxuu yuhuuda gaar uga dhigay, waxaan gaar uga dhigay dadka baniaadamkaba way ka caqli duwan yihiin, waayo waxay aaminsanyihiin in dadkaba iyaga loo abuuray inay fuulan sida dameerka, markuu dameer ku ciyana ay iskaga dagaan oo ay dameerkale fuulaan, sida ay inoo fuushan yihiin hadii aynu reer woqooyi nahay.
Yuhuudu, si ay u gaadhaan hadafkoodana waxay adeegsadaan caqligaa xayawaanka ee aan kor ku sheegay.
yuhuudu waa dullin, dullinkuna meel cidlo ah kuma noolaan karo, aakhirusamaanka waa ka muslimku buufinaayo, sida xadiisku inoo sheegay, ee macaa dhagaxu ku qaylinaayo.
Hadaba caqliga muslimka, kitaabka illaahay iyo sunah Rasuulka scw ayaa haga, laakiin caqliga xayawaanka oo qolooyinkan ay leeyihiin gaalada, munaafiqiint, siyaasiyiinta iyo basaasiintoodu waxaa haga dareenkii xaywaanka ee ahaa inu waxna cuno, waxna fuulo, meelna galo oo waliba aan xad lahayn. Waayo shahwaadku xad ma laha, hadii wax walba burburayaan waa inuu shahwaadkiisa fuliyo, wixii dhimanaya wixii burburaaya wixii isnacaaya dan kama laha.
Hadaba dhibaatada ina haysataa waxa weeyi caqligaa ay shahwaadku xukumayaan, iyo caqligaa Illaahii abuuray uu xakamaynaayo, ayaa is haya.
Markaa waxaan talo ku bixin lahaa marka aad dad doodaysaan waxaad eegtaa qofka ma caqligii xaywaanka ayuu wataa, mise caqligii muslimka, markaa qofka caqligiisa kula hadal si aydaan isuggu dhicin. Nin dadkii hore ee wanaagsanaa ayaa yidhi waar dadka caqligooda kula hadla.
Waxa Qoray: Nuur Xaaji Xiiray